moethuraaung – Myan Ball
အာဆငျနယျအသငျးခေါငျးဆောငျဖွဈတဲ့ အူဘာမီယနျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးအတှငျးမှာ ဗွိတိနျနိုငျငံက ကိုဗဈအတှကျ တားမွဈထားတဲ့စညျးကမျးကို ခြိုးဖောကျပွီး တကျတူးအသဈထိုးခဲ့တာကွောငျ့ ရောဂါပိုးကူးစကျခံရခွငျးရှိ၊ မရှိ စောငျ့ကွညျ့ ခံနရေတယျလို့ သိရပါတယျ။ အူဘာမီယနျဟာ မိခငျရဲ့အဖြားဝဒေနာကွောငျ့ ပွငျသဈနိုငျငံကို သှားစဉျမှာ တကျတူးအသဈ ကို ရေးထိုးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
စပိနျနိုငျငံသားတကျတူးပညာရှငျ နီကိုးလကျဈဘာနယျလျက သူရဲ့အငျစတာဂရမျအကောငျ့မှာ တကျတူးထိုးနတေုနျးက ပုံကို တငျထားခဲ့တယျလို့ သတငျးတှရေဲ့ဖျောပွခဲ့ပွီး အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ဘာနယျလျနဲ့ အူဘာမီယနျတို့ဟာ Mask (မကျြနှာအ ကာအကှယျ) တပျဆငျထားခွငျးမရှိခဲ့ဘူးလို့လညျး သိရပါတယျ။ မကျြနှာအကာအကှယျတပျဆငျထားခွငျးမရှိတာဟာ ဗွိတိနျနိုငျငံက ကိုဗဈအတှကျထုတျပွနျထားတဲ့စညျးမဉျြးကို ဖောကျဖကျြတာဖွဈတယျဆိုပွီးတော့ သတငျးတှကေဖျောပွခဲ့ ကွတာ ဖွဈပါတယျ။
အူဘာမီယနျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့လိဒျယူနိုကျတကျကို အနိုငျရတဲ့ပှဲမှာ အသငျးအတှကျ သူရဲ့ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂျဟကျထရဈ ကို သှငျးယူနိုငျခဲ့ပမေယျ့ အဲ့ဒီပှဲမှာ တကျတူးအသဈကို ဖုံးအုပျတဲ့အနနေဲ့ လကျအိတျစှပျပွီး ကစားခဲ့တယျလို့လညျး သိရပါ တယျ။ အာဆငျနယျအသငျးတာဝနျရှိသူတဈဦးကတော့ အူဘာမီယနျရဲ့ အခွအေနနေဲ့ ပတျသကျပွီး ကစားသမားနဲ့ ပွော ဆိုဆှေးနှေးမှုတှေ ပွုလုပျထားခဲ့ပွီလို့ ပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။
တက်တူးအသစ်ထိုးခဲ့တာကြောင့် ကိုဗစ်ရောဂါပိုး ရှိ၊ မရှိစောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခံနေရတဲ့ အာဆင်နယ်တိုက်စစ်မှူး အူဘာမီ ယန်
အာဆင်နယ်အသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ အူဘာမီယန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံက ကိုဗစ်အတွက် တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကို ချိုးဖောက်ပြီး တက်တူးအသစ်ထိုးခဲ့တာကြောင့် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရခြင်းရှိ၊ မရှိ စောင့်ကြည့် ခံနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အူဘာမီယန်ဟာ မိခင်ရဲ့အဖျားဝေဒနာကြောင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံကို သွားစဉ်မှာ တက်တူးအသစ် ကို ရေးထိုးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စပိန်နိုင်ငံသားတက်တူးပညာရှင် နီကိုးလက်စ်ဘာနယ်လ်က သူရဲ့အင်စတာဂရမ်အကောင့်မှာ တက်တူးထိုးနေတုန်းက ပုံကို တင်ထားခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဘာနယ်လ်နဲ့ အူဘာမီယန်တို့ဟာ Mask (မျက်နှာအ ကာအကွယ်) တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။ မျက်နှာအကာအကွယ်တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိတာဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံက ကိုဗစ်အတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းကို ဖောက်ဖျက်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ သတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အူဘာမီယန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လိဒ်ယူနိုက်တက်ကို အနိုင်ရတဲ့ပွဲမှာ အသင်းအတွက် သူရဲ့ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ဟက်ထရစ် ကို သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အဲ့ဒီပွဲမှာ တက်တူးအသစ်ကို ဖုံးအုပ်တဲ့အနေနဲ့ လက်အိတ်စွပ်ပြီး ကစားခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါ တယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကတော့ အူဘာမီယန်ရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကစားသမားနဲ့ ပြော ဆိုဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်ထားခဲ့ပြီလို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ဘာကွောငျ့ ဆှနျဟောငျမငျက ဂိုးသှငျးပွီးရငျ ကငျမရာရိုကျတဲ့ပုံနဲ့ အောငျပှဲခံတာလဲ …
ဘောလုံးသမားတဈယောကျအနနေဲ့ ဂိုးသှငျးယူပွီးတဲ့အခြိနျမှာ အောငျပှဲခံတဲ့အမူအရာ အမြိုးမြိုးရှိကွပါတယျ။ ကိုယျသှငျး ယူလိုကျတဲ့ ဂိုးတဈဂိုးအတှကျ အောငျပှဲခံမှုမှာ ပရိသတျတှအေတှကျ ထူးထူးခွားခွား အောငျပှဲခံတဲ့ကစားသမားတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဒီအထဲမှာ စပါးတိုကျစဈမှူး ဆှနျဟောငျမငျတဈယောကျတညျးလညျး ပါဝငျပါတယျ။ ဆှနျဟောငျမငျအနနေဲ့ ဂိုး သှငျးယူပွီးတိုငျး ကငျမရာနဲ့ ဓါတျပံရိုကျတဲ့ပုံစံ အောငျပှဲခံလရှေိ့တာ တှရေ့ပါတယျ။
အောငျပှဲခံမှုပုံစံအနအေထားနဲ့ ပတျသကျပွီး Sky Sports ရဲ့ အငျတာဗြူးတဈခုမှာတော့ ဆှနျဟောငျမငျက “ လှနျခဲ့တဲ့ တဈ နှဈလောကျတုနျးက ကြှနျတျောအနနေဲ့ ဂိုးသှငျးယူပွီးရငျ အောငျပှဲခံဖို့ပုံစံကို စဉျးစားခဲ့ပါတယျ။ အောငျပှဲခံပုံအမြိုးမြိုး ရှိတဲ့ ကွားက ဂိုးသှငျးယူနိုငျတာဟာ အမှတျရစရာကောငျးတဲ့ တဈခုဖွဈတာကွောငျ့ မှတျတမျးတငျတဲ့ပုံနဲ့ လကျကို ကငျမရာပုံစံ လုပျပွီး ဓါတျပုံရိုကျတဲ့ပုံစံနဲ့ အောငျပှဲခံခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ” လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဆှနျဟောငျမငျဟာ အာရှဖလားပွိုငျပှဲမှာ တောငျကိုရီးယားအသငျးနဲ့အတူ ရှတေံဆိပျဆု ရရှိခဲ့တာကွောငျ့ စဈမှုထမျးရမယျ့ ၂၁ လတာကာလကို ကငျးလှတျခှငျ့ရခဲ့ပွီး စပါးနညျးပွဖွဈလာတဲ့ မျောရငျဟိုရဲ့ လကျအောကျမှာ ခွစှေမျးပွနိုငျတဲ့ကစား သ မားတဈယောကျ ဖွဈလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ လကျရှိခွစှေမျးပွနိုငျမှုတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ဆှနျဟောငျမငျက ပြျောရှငျမိ တယျလို့ ပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။
ဘာကြောင့် ဆွန်ဟောင်မင်က ဂိုးသွင်းပြီးရင် ကင်မရာရိုက်တဲ့ပုံနဲ့ အောင်ပွဲခံတာလဲ …
ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂိုးသွင်းယူပြီးတဲ့အချိန်မှာ အောင်ပွဲခံတဲ့အမူအရာ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ ကိုယ်သွင်း ယူလိုက်တဲ့ ဂိုးတစ်ဂိုးအတွက် အောင်ပွဲခံမှုမှာ ပရိသတ်တွေအတွက် ထူးထူးခြားခြား အောင်ပွဲခံတဲ့ကစားသမားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ စပါးတိုက်စစ်မှူး ဆွန်ဟောင်မင်တစ်ယောက်တည်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဆွန်ဟောင်မင်အနေနဲ့ ဂိုး သွင်းယူပြီးတိုင်း ကင်မရာနဲ့ ဓါတ်ပံရိုက်တဲ့ပုံစံ အောင်ပွဲခံလေ့ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။
အောင်ပွဲခံမှုပုံစံအနေအထားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Sky Sports ရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ ဆွန်ဟောင်မင်က “ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ် နှစ်လောက်တုန်းက ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဂိုးသွင်းယူပြီးရင် အောင်ပွဲခံဖို့ပုံစံကို စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ အောင်ပွဲခံပုံအမျိုးမျိုး ရှိတဲ့ ကြားက ဂိုးသွင်းယူနိုင်တာဟာ အမှတ်ရစရာကောင်းတဲ့ တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် မှတ်တမ်းတင်တဲ့ပုံနဲ့ လက်ကို ကင်မရာပုံစံ လုပ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ အောင်ပွဲခံခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဆွန်ဟောင်မင်ဟာ အာရှဖလားပြိုင်ပွဲမှာ တောင်ကိုရီးယားအသင်းနဲ့အတူ ရွှေတံဆိပ်ဆု ရရှိခဲ့တာကြောင့် စစ်မှုထမ်းရမယ့် ၂၁ လတာကာလကို ကင်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့ပြီး စပါးနည်းပြဖြစ်လာတဲ့ မော်ရင်ဟိုရဲ့ လက်အောက်မှာ ခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့ကစား သ မားတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိခြေစွမ်းပြနိုင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆွန်ဟောင်မင်က ပျော်ရွှင်မိ တယ်လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ရီးရဲလျကို ပထမအကွိမျကိုငျတှယျတုနျးက ခနျြပီယံလိဂျ ၃ နှဈဆကျအထိ ရယူနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ဒုတိယအကွိမျကိုငျတှယျရာမှာ တော့ ရလဒျပိုငျးဆိုးရှားမှုတှနေဲ့ ရုနျးကနျနရေတဲ့ ဇီဒနျးအနနေဲ့ လကျရှိရာသီမှာ အောငျမွငျမှုတဈစုံတဈရာ မရခဲ့ဘူးဆိုရငျ နညျးပွရာထူးကနေ ထုတျပယျခံရဖို့ ရှိနတေယျလို့ သတငျးတှထှေကျဖျောနခေဲ့ပါတယျ။ ရီးရဲလျဟာ စပိနျဘုရငျ့ဖလားပွိုငျပှဲ က ထှကျခဲ့ရသလို လာလီဂါမှာလညျး အကျသလကျတီကိုနဲ့ အမှတျပွတျနမှေုကွောငျ့ ခနျြပီယံဆုကို ကာကှယျနိုငျဖို့ အခှငျ့ အရေးနညျးပါးနတေယျလို့ ဖျောပွခံနရေပါတယျ။
ရီးရဲလျအနနေဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲတဈခုတညျးမှာ ခနျြပီယံဖွဈဖို့ အခှငျ့အရေးပိုမြားတယျဆိုပမေယျ့ အသငျးကောငျးတှသော ကနျြရှိတော့တဲ့အနအေထားမှာ ခနျြပီယံဖွဈဖို့ဆိုတာ ခကျခဲတယျလို့လညျး သတငျးတှကေရေးသားခဲ့ကွပါတယျ။ ရာသီအ ကုနျမှာ ရီးရဲလျအနနေဲ့ ဖလားလကျမဲ့ရာသီနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရပါက ဇီဒနျးကိုထုတျပယျပွီး ကစားသမားဟောငျး ရာအူးလျနဲ့ ဂြူဗငျ တပျနညျးပွဟောငျး အလီဂရီတို့ကို နညျးပွအဖွဈခနျ့အပျမယျလို့ Cadena Ser via Football Italia ကဖျောပွခဲ့တာ ဖွဈပါ တယျ။
အလီဂရီဟာ ၂၀၁၉ ခုနှဈတုနျးက ဂြူဗငျတပျအသငျးကနေ ထုတျပယျခံရပွီးနောကျ လကျရှိအခြိနျထိ အသငျးလကျမဲ့ဖွဈနေ သူ ဖွဈပါတယျ။ ဂြူဗငျတပျအသငျးကို ကိုငျတှယျခဲ့စဉျက စီးရီးအခေနျြပီယံဆုကို ၅ နှဈဆကျရယူနိုငျခဲ့တဲ့ အလီဂရီဟာ ခြဲလျဆီး၊ အာဆငျနယျနဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျးတှကေို နညျးပွဖို့ သတငျးတှထှေကျခဲ့ဖူးပမေယျ့ လကျရှိအခြိနျထိ ဘယျ အသငျးကိုမှ ကိုငျတှယျခွငျးမရှိသေးတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရာသီမှာ ဖလားလက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဇီဒန်းကို ထုတ်ပယ်ပြီး ရာအူးလ် မဟုတ်ရင် အလီဂရီနဲ့ အစားထိုးဖို့ လုပ်နေတဲ့ ရီးရဲလ်
ရီးရဲလ်ကို ပထမအကြိမ်ကိုင်တွယ်တုန်းက ချန်ပီယံလိဂ် ၃ နှစ်ဆက်အထိ ရယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယအကြိမ်ကိုင်တွယ်ရာမှာ တော့ ရလဒ်ပိုင်းဆိုးရွားမှုတွေနဲ့ ရုန်းကန်နေရတဲ့ ဇီဒန်းအနေနဲ့ လက်ရှိရာသီမှာ အောင်မြင်မှုတစ်စုံတစ်ရာ မရခဲ့ဘူးဆိုရင် နည်းပြရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံရဖို့ ရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ဖော်နေခဲ့ပါတယ်။ ရီးရဲလ်ဟာ စပိန်ဘုရင့်ဖလားပြိုင်ပွဲ က ထွက်ခဲ့ရသလို လာလီဂါမှာလည်း အက်သလက်တီကိုနဲ့ အမှတ်ပြတ်နေမှုကြောင့် ချန်ပီယံဆုကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အခွင့် အရေးနည်းပါးနေတယ်လို့ ဖော်ပြခံနေရပါတယ်။
ရီးရဲလ်အနေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတည်းမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးပိုများတယ်ဆိုပေမယ့် အသင်းကောင်းတွေသာ ကျန်ရှိတော့တဲ့အနေအထားမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲတယ်လို့လည်း သတင်းတွေကရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ ရာသီအ ကုန်မှာ ရီးရဲလ်အနေနဲ့ ဖလားလက်မဲ့ရာသီနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါက ဇီဒန်းကိုထုတ်ပယ်ပြီး ကစားသမားဟောင်း ရာအူးလ်နဲ့ ဂျူဗင် တပ်နည်းပြဟောင်း အလီဂရီတို့ကို နည်းပြအဖြစ်ခန့်အပ်မယ်လို့ Cadena Ser via Football Italia ကဖော်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။
အလီဂရီဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တုန်းက ဂျူဗင်တပ်အသင်းကနေ ထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက် လက်ရှိအချိန်ထိ အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေ သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ်အသင်းကို ကိုင်တွယ်ခဲ့စဉ်က စီးရီးအေချန်ပီယံဆုကို ၅ နှစ်ဆက်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အလီဂရီဟာ ချဲလ်ဆီး၊ အာဆင်နယ်နဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းတွေကို နည်းပြဖို့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့ဖူးပေမယ့် လက်ရှိအချိန်ထိ ဘယ် အသင်းကိုမှ ကိုင်တွယ်ခြင်းမရှိသေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မနျစီးတီးအသငျးခေါငျးဆောငျဟောငျးတဈဦးဖွဈတဲ့ ရဈခတျြဒနျးက အသငျးအနနေဲ့ နှရောသီအပွောငျးအရှတေု့နျးက ဘငျ ဖီကာကနေ နောကျခံလူ ရူဘငျဒိုငျယကျဈကို ချေါယူနိုငျခဲ့တာက တကယျကောငျးခဲ့ပွီး ရူဘငျဒိုငျယကျဈကို ချေါယူနိုငျခဲ့တာ က ကှနျပနီကို အစားပွနျရသလိုမြိုး အသငျးအတှကျ အကြိုးရှိစခေဲ့တယျလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ ရူဘငျဒိုငျယကျဈအတှကျ မနျ စီးတီးအနနေဲ့ ပေါငျ ၆၄.၅ သနျးပေးခဲ့ရပမေယျ့ အကြိုးရှိတဲ့ချေါယူမှုဖွဈခဲ့တယျလို့လညျး ရဈခတျြဒနျးက ပွောခဲ့ပါတယျ။
အသကျ ၂၃ နှဈသာရှိသေးတဲ့ ရူဘငျဒိုငျယကျဈဟာ မနျစီးတီးအသငျးကို ရောကျရှိလာပွီးနောကျ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲ ၁၉ ပှဲမှာ ၁၃ ပှဲပေးဂိုးမရှိအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့သလို အခွားပွိုငျပှဲတှမှောလညျး ၇ ပှဲကစားပွီး ၅ ပှဲပေးဂိုးမရှိအောငျ စှမျး ဆောငျထားနိုငျခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ ဒါအပွငျ မနျစီးတီးဟာ နောကျဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲစုံပှဲ ၂၀ မှာ ၄ ဂိုးသာပေးခဲ့ရတာ ကွောငျ့ အသငျးရဲ့ခံစဈမှာ ဒိုငျယကျဈရဲ့ ပါဝငျစှမျးဆောငျနိုငျမှုက အရေးပါခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ရဈခတျြဒနျးက “ ကြှနျတျောအနနေဲ့ အသငျးကနေ ကှနျပနီ ထှကျသှားပွီးနောကျမှာ အသငျးကိုဦးဆောငျနိုငျတဲ့ကစားသမား မရှိတော့တာကွောငျ့ ငိုခဲ့ဖူးပါတယျ။ အခု ဒိုငျယကျဈက အသငျးကိုဦးဆောငျနိုငျတဲ့ကစားသမားမြိုးပါ။ အသကျငယျသေး တယျဆိုပမေယျ့ သူနဲ့ တှဲကစားရတဲ့ လာပျေါတီ၊ ဂြှနျစတုနျးတို့ကို သူအနနေဲ့ အကောငျးဆုံးဦးဆောငျနိုငျသလို ခံစဈမှာ လညျး အကောငျးဆုံးခွစှေမျးပွနိုငျတဲ့သူပါ” ဆိုပွီး ခြီးကြူးသှားခဲ့ပါတယျ။
ရူဘင်ဒိုင်ယက်စ်ကို ရတာ ကွန်ပနီကို အစားပြန်ရသလိုပဲ ဆိုပြီး ပြောခဲ့တဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ရစ်ချတ်ဒန်း
မန်စီးတီးအသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရစ်ချတ်ဒန်းက အသင်းအနေနဲ့ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့တုန်းက ဘင် ဖီကာကနေ နောက်ခံလူ ရူဘင်ဒိုင်ယက်စ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာက တကယ်ကောင်းခဲ့ပြီး ရူဘင်ဒိုင်ယက်စ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာ က ကွန်ပနီကို အစားပြန်ရသလိုမျိုး အသင်းအတွက် အကျိုးရှိစေခဲ့တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ရူဘင်ဒိုင်ယက်စ်အတွက် မန် စီးတီးအနေနဲ့ ပေါင် ၆၄.၅ သန်းပေးခဲ့ရပေမယ့် အကျိုးရှိတဲ့ခေါ်ယူမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်း ရစ်ချတ်ဒန်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၃ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ရူဘင်ဒိုင်ယက်စ်ဟာ မန်စီးတီးအသင်းကို ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲ ၁၉ ပွဲမှာ ၁၃ ပွဲပေးဂိုးမရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သလို အခြားပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း ၇ ပွဲကစားပြီး ၅ ပွဲပေးဂိုးမရှိအောင် စွမ်း ဆောင်ထားနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် မန်စီးတီးဟာ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံပွဲ ၂၀ မှာ ၄ ဂိုးသာပေးခဲ့ရတာ ကြောင့် အသင်းရဲ့ခံစစ်မှာ ဒိုင်ယက်စ်ရဲ့ ပါဝင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုက အရေးပါခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရစ်ချတ်ဒန်းက “ ကျွန်တော်အနေနဲ့ အသင်းကနေ ကွန်ပနီ ထွက်သွားပြီးနောက်မှာ အသင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့ကစားသမား မရှိတော့တာကြောင့် ငိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု ဒိုင်ယက်စ်က အသင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးပါ။ အသက်ငယ်သေး တယ်ဆိုပေမယ့် သူနဲ့ တွဲကစားရတဲ့ လာပေါ်တီ၊ ဂျွန်စတုန်းတို့ကို သူအနေနဲ့ အကောင်းဆုံးဦးဆောင်နိုင်သလို ခံစစ်မှာ လည်း အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့သူပါ” ဆိုပြီး ချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုကျတကျအသငျးခေါငျးဆောငျ မကျဂှိုငျးယားက အသငျးကိုမုနျးနတေဲ့အခွားအသငျးပရိသတျတှရေဲ့ အသံကို ပရီးမီး ယားလိဂျခနျြပီယံဆု ရယူပွီး အသံတိတျသှားအောငျ လုပျဆောငျရမှာ ဖွဈတယျလို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိအမှတျ ပေးဇယားဒုတိယနရောမှာ ရောကျနတေယျဆိုပမေယျ့ ယူနိုကျတကျဟာ ၂၀၁၃ ခုနှဈနောကျပိုငျးမှာ ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျြပီ ယံဖွဈဖို့ ရပေနျးစားလကျြ ရှိနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
မကျဂှိုငျးယားက အသငျးရဲ့နညျးပွကွီး ဆာအဲလကျဖာဂူဆနျကွောငျ့ ယူနိုကျတကျအသငျးကို ကွိုကျတဲ့သူနဲ့ မုနျးတဲ့သူတှေ ရှိတာကို နားလညျပွီး သူအနနေဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျအဖွဈ တာဝနျယူထားတဲ့အခြိနျမှာ ပထမဆုံးခနျြပီယံဆုကို ရယူနိုငျဖို့ အလိုရှိနတေယျလို့ သတငျးတှကေဖျောပွခဲ့ကွပါတယျ။အသကျ ၂၇ နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ မကျဂှိုငျးယားက “ အသငျးကို ရောကျ လာပွီးနောကျမှာ အသငျးအနနေဲ့ တိုးတကျမှုအမြားကွီးရှိလာခဲ့ပွီး ခနျြပီယံဆုကို စိနျချေါလာနိုငျပါပွီ” လို့ Utd Podcast က တဆငျ့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဆကျလကျပွီး ယူနိုကျတကျအသငျးနောကျခံလူဟောငျးတဈဦးဖွဈတဲ့ ဒေးဗဈမရေဲ့ မေးမွနျးမှုကိုတော့ မကျဂှိုငျးယားက “ အခွားအသငျးပရိသတျတှကေ ကြှနျတျောတို့ ကရြှုံးတာကိုမွငျခငျြကွပါတယျ။ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကလပျအသငျးအ ကွောငျးကို ပွောနခြေိနျမှာ အခွားသူတှကေ ကြှနျတျောတို့အကောငျးဆုံးလုပျနိုငျမှာကို အလိုမရှိကွပါဘူး။ အသငျးခေါငျး ဆောငျတဈယောကျအနနေဲ့ ခနျြပီယံဆုကို ကိုငျမွှောကျနိုငျရငျတော့ ကြှနျတျောရဲ့မကျြနှာမှာ အပွုံးအကွီးကွီးတဈခုကို တှမွေ့ငျရမှာပါ” ဆိုပွီး ပွောခဲ့ပါတယျ။
အသင်းကို မုန်းနေသူတွေကို ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆု ရယူပြီး အသံတိတ်စေမယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်း ခေါင်းဆောင် မက်ဂွိုင်းယား
ယူနိုက်တက်အသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဂွိုင်းယားက အသင်းကိုမုန်းနေတဲ့အခြားအသင်းပရိသတ်တွေရဲ့ အသံကို ပရီးမီး ယားလိဂ်ချန်ပီယံဆု ရယူပြီး အသံတိတ်သွားအောင် လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအမှတ် ပေးဇယားဒုတိယနေရာမှာ ရောက်နေတယ်ဆိုပေမယ့် ယူနိုက်တက်ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီ ယံဖြစ်ဖို့ ရေပန်းစားလျက် ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဂွိုင်းယားက အသင်းရဲ့နည်းပြကြီး ဆာအဲလက်ဖာဂူဆန်ကြောင့် ယူနိုက်တက်အသင်းကို ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ မုန်းတဲ့သူတွေ ရှိတာကို နားလည်ပြီး သူအနေနဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့အချိန်မှာ ပထမဆုံးချန်ပီယံဆုကို ရယူနိုင်ဖို့ အလိုရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မက်ဂွိုင်းယားက “ အသင်းကို ရောက် လာပြီးနောက်မှာ အသင်းအနေနဲ့ တိုးတက်မှုအများကြီးရှိလာခဲ့ပြီး ချန်ပီယံဆုကို စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါပြီ” လို့ Utd Podcast က တဆင့် ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ယူနိုက်တက်အသင်းနောက်ခံလူဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေးဗစ်မေရဲ့ မေးမြန်းမှုကိုတော့ မက်ဂွိုင်းယားက “ အခြားအသင်းပရိသတ်တွေက ကျွန်တော်တို့ ကျရှုံးတာကိုမြင်ချင်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကလပ်အသင်းအ ကြောင်းကို ပြောနေချိန်မှာ အခြားသူတွေက ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မှာကို အလိုမရှိကြပါဘူး။ အသင်းခေါင်း ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ချန်ပီယံဆုကို ကိုင်မြှောက်နိုင်ရင်တော့ ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာမှာ အပြုံးအကြီးကြီးတစ်ခုကို တွေ့မြင်ရမှာပါ” ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကိုဗဈတားမွဈခကျြကွောငျ့ လီဗာပူးအနနေဲ့ ဂြာမနီကို ဝငျခှငျ့မရတာကွောငျ့ ခနျြပီယံလိဂျ ကစားဖွဈမှာမဟုတျလို့ သိရ
ဗွိတိနျနိုငျငံမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုး ပွနျလညျဖွဈပှားမှု မြားပွားနတောကွောငျ့ ဂြာမနီနိုငျငံအနနေဲ့ လာမယျ့ ဖဖေျောဝါရီ ၁၆ ရကျနမှေ့ာ ကစားဖို့ ရှိနတေဲ့ လဈပျဇဈနဲ့ လီဗာပူးတို့ရဲ့ ပှဲစဉျအတှကျ လာကစားမယျ့ လီဗာပူးအသငျးကို ပွညျဝငျခှငျ့မပေးခဲ့ ဘူးလို့ သတငျးတှရေဲ့ဖျောပွခကျြအရ သိရပါတယျ။ ဂြာမနီနိုငျငံတှအေနနေဲ့ လကွေောငျးလိုငျးတှကေို ဖဖေျောဝါရီလ ၁၇ ရကျနမှေ့ာမှ ပွနျဖှငျ့မှာဖွဈတာကွောငျ့လို့လညျး လီဗာပူးအနနေဲ့ ကစားခှငျ့မရတာလို့ သတငျးအခြို့ကလညျး ဖျောပွခဲ့ကွပါ တယျ။
ဂြာမနီနိုငျငံရဲ့တာဝနျရှိအဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈတဲ့ BMI ကတော့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျကိုတော့ အထူးအနနေဲ့ကငျြးပခှငျ့ပွုမှာ မဟုတျဘူးဆိုပွီး ကွာသပတေးနကေ့ အတညျပွုပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ယူအီးအကျဖျအအေနနေဲ့ကတော့ လဈပျဇဈအသငျး တာဝနျရှိသူတှကေို ဖဖေျောဝါရီလ ၈ ရကျနမှေ့ာ နောကျဆုံးထားပွီး အကွောငျးကွားဖို့ ညှနျကွားထားတယျလို့လညျး သတငျးတှရေဲ့ ဖျောပွခကျြအရ သိရပါတယျ။
အခွားသတငျးတဈခုမှာတော့ ဒုတိယအကြော့အဖွဈကစားရမယျ့ အနျဖီးလျကှငျးပှဲစဉျကို အရငျကစားစဖေို့ရှိတယျလို့လညျး သတငျးတှကေ ဖျောပွခဲ့ကွပါတယျ။ ဖဖေျောဝါရီလ ၈ ရကျနမှေ့ာမှ ယူအီးအကျဖျအအေနနေဲ့ လုံလောကျတဲ့ ဖွရှေငျးမှုမြိုး မရခဲ့ဘူးဆိုရငျလညျး ပထမအကြော့ပှဲစဉျအတှကျ လီဗာပူးအသငျးကို ၃ ဂိုးပွတျနဲ့ အနိုငျပေးဖို့ ရှိနတေယျလို့လညျး သတငျး တှကေဖျောပွခဲ့ကွပါတယျ။
ကိုဗစ်တားမြစ်ချက်ကြောင့် လီဗာပူးအနေနဲ့ ဂျာမနီကို ဝင်ခွင့်မရတာကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ် ကစားဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ သိရ
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှု များပြားနေတာကြောင့် ဂျာမနီနိုင်ငံအနေနဲ့ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ကစားဖို့ ရှိနေတဲ့ လစ်ပ်ဇစ်နဲ့ လီဗာပူးတို့ရဲ့ ပွဲစဉ်အတွက် လာကစားမယ့် လီဗာပူးအသင်းကို ပြည်ဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ ဘူးလို့ သတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတွေကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့မှာမှ ပြန်ဖွင့်မှာဖြစ်တာကြောင့်လို့လည်း လီဗာပူးအနေနဲ့ ကစားခွင့်မရတာလို့ သတင်းအချို့ကလည်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါ တယ်။
ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BMI ကတော့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်ကိုတော့ အထူးအနေနဲ့ကျင်းပခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ကြာသပတေးနေ့က အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ယူအီးအက်ဖ်အေအနေနဲ့ကတော့ လစ်ပ်ဇစ်အသင်း တာဝန်ရှိသူတွေကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့မှာ နောက်ဆုံးထားပြီး အကြောင်းကြားဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်း သတင်းတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။
အခြားသတင်းတစ်ခုမှာတော့ ဒုတိယအကျော့အဖြစ်ကစားရမယ့် အန်ဖီးလ်ကွင်းပွဲစဉ်ကို အရင်ကစားစေဖို့ရှိတယ်လို့လည်း သတင်းတွေက ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့မှာမှ ယူအီးအက်ဖ်အေအနေနဲ့ လုံလောက်တဲ့ ဖြေရှင်းမှုမျိုး မရခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်း ပထမအကျော့ပွဲစဉ်အတွက် လီဗာပူးအသင်းကို ၃ ဂိုးပြတ်နဲ့ အနိုင်ပေးဖို့ ရှိနေတယ်လို့လည်း သတင်း တွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
လကျရှိအခြိနျထိ ဘယျအသငျးနဲ့မှ ဆှေးနှေးခွငျးမရှိသေးဘူး ဆိုပွီး ပွောလိုကျတဲ့ ဘာစီလိုနာကထှကျတော့မယျ မကျဆီ
ပွီးခဲ့တဲ့နှရောသီအပွောငျးအရှတေု့နျးက အသငျးကနေ ထှကျဖို့ တောငျးဆိုမှုပွုလုပျခဲ့တဲ့ မကျဆီကို ပီအကျဈဂြီ၊ မနျစီးတီး တို့ အပါအဝငျ ဥရောပထိပျသီးကလပျအသငျးတှကေ ချေါယူဖို့ စောငျ့ကွညျ့ခဲ့ကွပါတယျ။ ဘာစီလိုနာနဲ့ စာခြုပျနောကျဆုံး နှဈကို ရောကျရှိနတေဲ့ မကျဆီဟာ ဇနျနဝါရီအပွောငျးအရှမှေ့ာတော့ စညျးမဉျြးအရ အခွားအသငျးနဲ့ အပွောငျးအရှအေ့ တှကျ စကားပွောဆိုခှငျ့ရှိနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျထိလညျး ဘာစီလိုနာအသငျးနဲ့ စာခြုပျသဈခြုပျဆိုဖို့ သဘောတူညီမှုမရသေးတဲ့ မကျဆီက သူအနနေဲ့ အသငျးပွောငျးရှဖေို့အတှကျ အခွားအသငျးတဈသငျးသငျးနဲ့ ဆှေးနှေးပွောဆိုထားတာ မရှိသေးဘူးလို့ ပွောခဲ့ပွီး ပီအကျဈ ဂြီ၊ မနျစီးတီး အသငျးတို့နဲ့ ထှကျပျေါနတေဲ့ သတငျးတှကေို ငွငျးဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။ ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ ဥက်ကဌအပွောငျး အလဲ၊ ပရိသတျတှရေဲ့တောငျးဆိုမှုကွောငျ့လညျး မကျဆီအနနေဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ စာခြုပျသဈခြုပျဆိုဖွဈမယျလို့လညျးသတငျး တှကေ ဖျောပွခဲ့ကွပါတယျ။
စပိနျသတငျးစာတဈစောငျဖွဈတဲ့ EL Mundo ကတော့ ဘာစီလိုနာအသငျးအနနေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့နှရောသီက မကျဆီကိုမရောငျးခြ ခဲ့တာကွောငျ့ စာခြုပျပါလြျောကွေးဖွဈတဲ့ ယူရို ၅၅၅ သနျး နဈနာခဲ့ရတယျဆိုပွီး ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ ဘာစီလိုနာဥက်ကဌလောငျး အဖွဈ သတျမှတျခံထားရတဲ့ လာပျေါတာ၊ တိုနီဖရိုငျဆာနဲ့ ဗဈတာဖောငျ့ တို့အနနေဲ့ ဥက်ကဌသဈဖွဈလာပါက မကျဆီကို ဆကျထိနျးထားနိုငျဖို့ အဓိကထားဆောငျရှကျရမယျလို့လညျး သတငျးတှကေဖျောပွခဲ့ကွပါတယျ။
လက်ရှိအချိန်ထိ ဘယ်အသင်းနဲ့မှ ဆွေးနွေးခြင်းမရှိသေးဘူး ဆိုပြီး ပြောလိုက်တဲ့ ဘာစီလိုနာကထွက်တော့မယ် မက်ဆီ
ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့တုန်းက အသင်းကနေ ထွက်ဖို့ တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီကို ပီအက်စ်ဂျီ၊ မန်စီးတီး တို့ အပါအဝင် ဥရောပထိပ်သီးကလပ်အသင်းတွေက ခေါ်ယူဖို့ စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာစီလိုနာနဲ့ စာချုပ်နောက်ဆုံး နှစ်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မက်ဆီဟာ ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာတော့ စည်းမျဉ်းအရ အခြားအသင်းနဲ့ အပြောင်းအရွှေ့အ တွက် စကားပြောဆိုခွင့်ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ထိလည်း ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ သဘောတူညီမှုမရသေးတဲ့ မက်ဆီက သူအနေနဲ့ အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက် အခြားအသင်းတစ်သင်းသင်းနဲ့ ဆွေးနွေးပြောဆိုထားတာ မရှိသေးဘူးလို့ ပြောခဲ့ပြီး ပီအက်စ် ဂျီ၊ မန်စီးတီး အသင်းတို့နဲ့ ထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းတွေကို ငြင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ဥက္ကဌအပြောင်း အလဲ၊ ပရိသတ်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်လည်း မက်ဆီအနေနဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖြစ်မယ်လို့လည်းသတင်း တွေက ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
စပိန်သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ EL Mundo ကတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီက မက်ဆီကိုမရောင်းချ ခဲ့တာကြောင့် စာချုပ်ပါလျော်ကြေးဖြစ်တဲ့ ယူရို ၅၅၅ သန်း နစ်နာခဲ့ရတယ်ဆိုပြီး ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာဥက္ကဌလောင်း အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ လာပေါ်တာ၊ တိုနီဖရိုင်ဆာနဲ့ ဗစ်တာဖောင့် တို့အနေနဲ့ ဥက္ကဌသစ်ဖြစ်လာပါက မက်ဆီကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ အဓိကထားဆောင်ရွက်ရမယ်လို့လည်း သတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
စပါးကို ကြှနျတျောရဲ့နညျးဗြူဟာတှနေဲ့ အနိုငျရခဲ့တာ မဟုတျဘူးလို့ ပွောခဲ့တဲ့ ခြဲလျဆီးနညျးပွ တူခယျြ
ခြဲလျဆီးအသငျးကို ကိုငျတှယျပွီးနောကျ ပထမဆုံးလနျဒနျဒါဘီအဖွဈ စပါးနဲ့ ကစားခဲ့ရပွီး နိုငျပှဲရခဲ့ပမေယျ့ နညျးပွ တူခယျြ က စပါးကိုအနိုငျရခဲ့တာဟာ သူရဲ့နညျးဗြူဟာတှကွေောငျ့ မဟုတျဘူးလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ တူခယျြဟာ စပါးနဲ့ပှဲမှာ ၃-၄-၂-၁ ကစားကှကျနဲ့ ပှဲထှကျလာခဲ့ပွီး ခံစဈကို ဦးစားပေးဖို့ လုပျဆောငျလာခဲ့ပမေယျ့ တနျပွနျတိုကျစဈဆငျမှုတှကေို အကောငျးဆုံး လုပျဆောငျနိုငျခဲ့သလို အိမျရှငျစပါးအသငျးကိုလညျး ဖိအားပေးနိုငျခဲ့တယျလို့ သတငျးတှကေဖျောပွခဲ့ကွပါတယျ။
စပါးကိုအနိုငျရခဲ့တာကွောငျ့ ခြဲလျဆီးဟာ အမှတျပေးဇယားအဆငျ့-၆ နရောကို ရောကျလာခဲ့ပွီး ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့နရော နဲ့ ၄မှတျပဲ ကှာဟတော့တာ ဖွဈပါတယျ။ ပှဲအပွီးမှာတော့ တူခယျြက “ အသငျးအနနေဲ့ နိုငျပှဲရခဲ့တာကွောငျ့ ကနြေပျမိပါ တယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနိုငျပှဲက ကြှနျတျောရဲ့ နညျးဗြူဟာတှကွေောငျ့ အနိုငျရခဲ့တာမဟုတျပါဘူး။ ကစားသမားတှရေဲ့ ကိုယျ ပိုငျအားထုတျမှုတှကွေောငျ့သာ အနိုငျရခဲ့တာပါ” လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
Soccer Football – Premier League – Tottenham Hotspur v Chelsea – Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain – February 4, 2021 Tottenham Hotspur manager Jose Mourinho and Chelsea manager Thomas Tuchel REUTERS/Neil Hall EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. – UP1EH241JYJKA
စပါးအသငျးဟာ နောကျဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ သုံးပှဲဆကျ ရှုံးခဲ့သလို အိမျကှငျးနှဈပှဲဆကျလညျး ရှုံးခဲ့တာကွောငျ့ မျောရငျဟိုအနနေဲ့ ဖိအားတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ ခြဲလျဆီးကို အိမျကှငျးမှာ ရှုံးခဲ့တာဟာ မျောရငျဟို အတှကျ မတူညီတဲ့ကလပျ ရှဈသငျးကို ကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ လိဂျအိမျကှငျး ၃၂၆ ပှဲမှာ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ နှဈပှဲဆကျရှုံးခဲ့ တာ ဖွဈတယျလို့လညျး သတငျးတှရေဲ့ ဖျောပွခကျြအရ သိရပါတယျ။
စပါးကို ကျွန်တော်ရဲ့နည်းဗျူဟာတွေနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီးနည်းပြ တူချယ်
ချဲလ်ဆီးအသင်းကို ကိုင်တွယ်ပြီးနောက် ပထမဆုံးလန်ဒန်ဒါဘီအဖြစ် စပါးနဲ့ ကစားခဲ့ရပြီး နိုင်ပွဲရခဲ့ပေမယ့် နည်းပြ တူချယ် က စပါးကိုအနိုင်ရခဲ့တာဟာ သူရဲ့နည်းဗျူဟာတွေကြောင့် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ တူချယ်ဟာ စပါးနဲ့ပွဲမှာ ၃-၄-၂-၁ ကစားကွက်နဲ့ ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီး ခံစစ်ကို ဦးစားပေးဖို့ လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပေမယ့် တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သလို အိမ်ရှင်စပါးအသင်းကိုလည်း ဖိအားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
စပါးကိုအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် ချဲလ်ဆီးဟာ အမှတ်ပေးဇယားအဆင့်-၆ နေရာကို ရောက်လာခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်နေရာ နဲ့ ၄မှတ်ပဲ ကွာဟတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲအပြီးမှာတော့ တူချယ်က “ အသင်းအနေနဲ့ နိုင်ပွဲရခဲ့တာကြောင့် ကျေနပ်မိပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနိုင်ပွဲက ကျွန်တော်ရဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကြောင့် အနိုင်ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကစားသမားတွေရဲ့ ကိုယ် ပိုင်အားထုတ်မှုတွေကြောင့်သာ အနိုင်ရခဲ့တာပါ” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
စပါးအသင်းဟာ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် သုံးပွဲဆက် ရှုံးခဲ့သလို အိမ်ကွင်းနှစ်ပွဲဆက်လည်း ရှုံးခဲ့တာကြောင့် မော်ရင်ဟိုအနေနဲ့ ဖိအားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးကို အိမ်ကွင်းမှာ ရှုံးခဲ့တာဟာ မော်ရင်ဟို အတွက် မတူညီတဲ့ကလပ် ရှစ်သင်းကို ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ လိဂ်အိမ်ကွင်း ၃၂၆ ပွဲမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နှစ်ပွဲဆက်ရှုံးခဲ့ တာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သတင်းတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။